Guddoomiyaha Aqalka Sare oo kulan gaar ah la qaatay Sheekh Shariif – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo kulan gaar ah la qaatay Sheekh Shariif
Ardaan Yare 2 February 2021
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabd Xaashi Cabdullaahi ayaa Maanta kulan la qaatay Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sh Axmed ahna hoggaamiyaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha.
Kulanka oo ka dhacay hoyga Guddoomiye Cabdi Xaashi uu booqday Shariifka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan Arrimaha doorashooyinka dhacaya oo weli muran xoogan uu ka taagan.
Sidoo kale labada dhinac ayaa diirada saaray sida lagu xalin karro arrinta Xildhibaanada Baarlamaanka ee Gobolada Waqooyi ee Somaliland oo siwen isugu hayaan Guddoomiye Xaashi iyo dowladda Federaalka.
Warar la helayo ayaa sheegaya in inta uu socday kulanka lagu soo hadal qaaday Shirka Madxada dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada Maanta ugu farmaya Magaalada Dhuusamareeb, kaasi oo looga hadli doono khilaafka doorashada.
Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa xalay dalbaday inuu ka qeyb galo Shirka furmaya, isla markaana warqad u diray Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, in kastoo aan weli looga soo jawaabin sida aan wararka ku helnay.
Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa ku baaqay in la balaariyo Shirka Maanta Madaxda uga furmaya Magaalada Dhuusamareeb, ayna ka qeyb galaan saamileyda siyaasadeed ee dalka, si xal looga gaaro caqabadaha ku hor gudban qabsoomida doorashada 2021.
Sawirro:-Galmudug oo soo bandhigtay Meydadka rag weeraray Dhuusamareeb
DAAWO SAWIRRO:-Duqa Muqdisho oo gaaray Caasimadda Galmudug